Ahoana ny fomba hanampiana mpampiasa amin'ny Google Analytics | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanampiana mpampiasa amin'ny Google Analytics
Alakamisy 8, 2018 Zoma 9 Novambra 2018 Douglas Karr
Mety hanondro olan'ny fampiasana sasany amin'ny lozisinao io rehefa tsy afaka manao zavatra tsotra toy ny manampy mpampiasa hafa ianao… ahhh, fa izany no tianay rehetra Google Analytics. Tena manoratra ity lahatsoratra ity ho an'ny iray amin'ireo mpanjifanay izahay mba hahafahan'izy ireo manampy anay ho mpampiasa. Tsy ny manampy ny mpampiasa no asa mora indrindra.
Voalohany, mila mandeha any amin'ny Admin ianao, izay nifindran'i Google Analytics teo ankavanan'ny farany teo amin'ny efijery fitetezana.
Ity dia hitondra anao amin'ny efijery fitetezana fitetezana feno ho an'ny kaontinao. Safidio ny fananana tianao ampiana ilay mpampiasa, dia kitiho Fitantanana ny mpampiasa.
Ity dia hipoitra sidebar miaraka amin'ny lisitry ny mpampiasa rehetra. Raha tsindrio ny mari-pamantarana manga plus eo ankavanan'ny ambony dia azonao atao ny manampy mpampiasa fanampiny ary apetraho ny fahazoan-dàlana.
Raha manampy olona hitantana Webmaster sy Google Analytics ianao dia mila mamela ny alalana rehetra. Hizaha ny boaty tsy maintsy alefa koa aho raha hampandre azy ireo fa manana fidirana izy ireo izao.
Ity misy horonantsary topimaso avy amin'ny Google izay nomena ela be dia be tamin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Tags: Google Analyticsmpampiasa analytics googleFahazoan-dàlan'ny mpampiasa google analyticsGoogle tenifototra mpitantanagoogle webmasterGoogle +ahoana nofitantanana mpampiasa
Ahoana no hataon'ny Blockchain amin'ny famolavolana solika amin'ny indostrian'ny e-varotra
Manitatra ny fiasan'ny pejin'ny orinasa ny LinkedIn
Mpanampy birao virtoaly
Apr 13, 2011 amin'ny 4: 26 AM
Manao serivisy mpanampy virtoaly ho an'ny tompona orinasa madinika izahay. Nanomboka nampiasa Google analytics izahay mba hahitana ny isan'ny fitsidihana, mpitsidika sns. Misaotra tamin'ny fizarana ny vaovao mahasoa taminay. Na dia nanoratra ity ho an'ny iray amin'ireo mpanjifanao aza ianao dia mahasoa kokoa ho anay izany.
17 Desambra 2012 à 5:21
Afaka mametraka fanontaniana ve aho? Inona no azoko atao raha tsy misy mombamomba azo safidiana? Tsy misy ny mombamomba anao, noho izany dia tsy afaka manampy anao mpampiasa vaovao amin'ny kaontin'ny tranokala izahay. Fantatrao ve ny antony tsy ahafahantsika manampy mombamomba avy amin'ny tsanganana ankavia mankany amin'ny tsanganana havanana?